elatra, ho an’i Madagasikara | mandimby maharo
elatra, ho an’i Madagasikara	Posted on 12 April 201212 April 2012 by Mandimby Maharo	Nigadona androany tamin’ny 8ora latsaka dimy teny Ivato ny iray amin’ireo fiaramanidina roa Airbus 340-300, nomena ny anarana ELATRA an’ny kaompaniam-pitanterana Air Madagascar. Taorian’ny olana nahazo ireo Boeing 767, izay nahazo fandrarana tsy nahazo nisidina avy amin’nu Aviation Civile Europeenne dia nanapa-kevitra ny hampitaovana Airbus ny orinasa ny fanjakana. Nandritry ny lanonana nanambarana ny trano mora notanterahana tao mahamasina no nahitana ity resaka ity voalohany, raha nanatrika izany lanonana izany ny tomponan-andraikitra frantsay vitsivitsy ny orinasa Airbus
Raha ny Airbus 340 aloha no resahana dia karazam-piaramanidina natokana hanao dia lavitra izy ity. Tany amin’ny taona 1993 tany nanombonana nampiasana azy ho amin’ny fitanterana olona. Raha ny ohatra nomen’ny tompon’andraikitra ara-barotry ny orinasa Airbus dia afaka misidina tsy ankiato mampitohy ny alavirana avy eto Madagasikara mankany Nouvelle-Zélande izy ity, izay tombanana ho 12 300 km. mahazaka olona 295 (12 ao amin’ny kilasy voalohany, 42 ao amin’ny kilasy faharoa ary 241 ho an’ny toerana tsotra). Azo hitarina hatrany amin’ny 440 nefa izany toerana izany raha atao “charter”. Eo ihany koa ny fahafahany mitondra entana maro noho ny fahalalahan’ny fanambaniny. Raha ny Boeing 747/ B767 fampiasa hatrizay dia 375 fotsiny farafahabetsany no zakany, ary 12 200 km monja no alavirandavitra azony atao indray misidina.
Anisan’ny fanamby lehibe tokoa ho an’ny Filoha Avon’ny Tetezamita moa ity fanavaozana ny fiara ampiasain’ny AirMadagascar ity, ka tsy mahagaga raha ny tenany Andry Nirina Rajoelina mihintsy no lasa naka izany fiara izany tany Frantsa, rehefa avy nandalo fanamboarana maromaro ihany izany fiara izany. Satria raha ny fantatra dia efa niasa amam-polotaonany tany amin’ny orinasa hafa ireto fiaza ireto izao novidiana (?) izao. Eo amin’izay fomba nahazoana azy ireto izay indrindra no mampametram-panontaniana ny maro. Raha ny filazan’ny FAT aloha dia azo “mora” izy ary tsy ny kaompaniam-pitanterana no handoha ny vola. Dia izay! tsy misy tohiny na fanazavana fanampiny. Na ny tale jeneralin’ny Air Madagascar, Hugues Ratsiferana_mpanamory mitantana ny kaompania, no nanontaniana dia nolazainy fa tsiambaratelo tsotra izao izany. Dia samy gaga ny rehetra hoe hay ve azo atao izany manome fiaramanidina 2 ho an’ny orinasam-PANJAKANA ka atao tsiambaratelo ny fomba azahoana azy. Dia natao aiza izany ila andinin-dalana manome fahafahana ho an’ny olom-pirenena manontany (compte rendu) ny mpitondra azy? Raha atao hoe fanomezana ary izy ireto dia toa hita mazava ny mpanome: ny fiaramanidina aloha dia vita Frantsay, ny mpanamory azy –vonjimaika hono- sia frantsay avokoa, tsy azo ho lazaina noho izany fa ny alemana na ny amerikana no nanome azy. Ary na dia fanomezana ary izy ireto, dia ho tena maimaim-poana tokoa ve?
Anisan’ny mampanahy ny maro koa ny momba ny mety ho fahaizan’ny mpanamory sy teknisiana Malagasy, efa zatra Boeing, hitondra sy hikoja izany Airbus izany. Malaza mahay sy maranin-tsina ny mpanamory Malagasy ka irina dia mba ho tena hahafehy haingana izany fiara izany tokoa anie izt ireo aorian’ny fiofanana narahany vao tapa-bolana izay. Fiofanana izay fantatra fa andaniam-bola maro ihany koa (tsy nanaiky raha tsy hotely kitana dimy no ipetrahany ireo mpiofana any frantsa). Eo koa ny fitaovana ampiasaina amin’ny fikojana ny fiara. Na ny bolao aza hoy ny manampahaizana manokana momba azy itony dia be no tsy mitovy amin’ireo tahiry ananan’ny AirMad. Na ny misolo kiraro ary hoy ilay mpivazivazy izay mbola misy hoe ny tadin’ity iray ity tsy mety amin’iroa, maika fa hoe boeing sy airbus no hifanakalo. Ankoatra izay rehetra izay ny resaka momba ny Air Force One ll izay toa lo fotsiny eo Ivato. Raha tsiahivina tokoa manko dia anisan’ny fanankianan’ireo mpanohitra tamin’nizany, lasa mpitondra ankehitriny, ny nividianana io fiara io. Mety saranga tsy mitovy angamba saingy raha ny fampanantenana momba azy io dia ny hivarotana azy hividianana vary ho an’ny rehetra. Isika ity nefa toa nividy (?) roa be izao. Sa ve efa voky ny olona ka afaka mividy Airbus amin’izay isaka? Dia miverina hatrany ny fanontaniana hoe fa iza no tena hahita tombotsoa amin’ny fiaramanidina? Sa ve fihinana ve izany Airbus zany?
ENY E!! TSY TOKONY HO KIANINA LAVA HONO ITY FANOMEZANA ITY HOY NY Fat. Saingy toa mahalasa saina ihany. Ny fanakianana izao hetsika izao hono dia heveriny ho fandatsana ny Malagasy te hivoatra. Dia manontany azy ary aho hoe tsy mandats ny Malagasy ary ve ny fifidianana fiaramanidina amin’ny vola tsy fantatra ny fiaviany nefa ny vahoaka mihinana ny tsy fihinana terena hifehy kibo.
Raha ny tenako manokana dia mbola tsy nitaingina fiaramanidina na boeing io na airbus, fa mpandeha bisy manitsaka godorao be lavadavaka isanandro.
Tags: air madagascar, transportation, travelCategories: Uncategorized